I-China TQSF Series Gravity Destoner Ukukhiqiza nefektri | I-Chinatown
I-TQSF uchungechunge lwamandla adonsela phansi wokuhlanza okusanhlamvu, Ukususa itshe, Ukuhlukanisa okusanhlamvu, Ukususa ukungcola kokukhanya njalonjalo.
TQSF Uchungechunge Gravity Destoner
I-TQSF Series Gravity Destoner yokuhlanzwa okusanhlamvu, Ukususa itshe, Ukuhlukanisa okusanhlamvu, Ukususa ukungcola kokukhanya njalonjalo.
Lesi sihlukanisi samatshe sisebenza kahle ngokuhlukanisa. Kungasusa amatshe alula ngosayizi wokusanhlamvu ekugelezeni okusanhlamvu, kube negalelo elikhulu ekutholeni imikhiqizo ephelele kuze kufinyelele kumazinga ahlobene nokuhlanzeka kokudla.
Okuqukethwe kuwela kupuleti lomhlahlandlela kusuka kokungena bese kumbozwa ngokulinganayo kububanzi bonke besihlungo esingenhla ngenxa yesenzo sokudlidliza komshini. Isenzo esihlanganisiwe sokudlidliza nokugeleza komoya kwenza ukuthi okusesihlokweni esingenhla sihlukaniswe ngokuzenzakalela ngokuya ngamandla aso adonsela phansi nosayizi oyimbudumbudu. Izinto ezikhanyayo ziba ngaphezulu kwe-sieve engenhla futhi zikhishwe emshinini emsileni womshini. Izinto eziningi ezikhanyayo njengotshani nothuli zisusiwe endaweni yokufisela izifiso. Izinto ezisindayo kanye namatshe nesihlabathi ziwela esihlungwini esingezansi ngesihlungo esingenhla. Njengoba isenzo sokudlidliza komshini, ukugeleza komoya nokungqubuzana, impahla esindayo iya ngasemsileni womshini futhi ikhishwa endaweni ephuma kuyo umsila ngenkathi isihlabathi namatshe kuya ngasekhanda lomshini futhi kukhishwa ophumeni lwetshe. Ngamawindi wokubuka, u-opharetha angabheka ngqo umphumela wokuhlukanisa nokwakha ngamatshe.
- Ibhokisi lesihlungo esivame ukulayishwa ngama-sieve anezingqimba ezimbili lisekelwa yiziphethu zenjoloba eziyize futhi libangelwa ukuthi lidlidliziswe isidlidlizi esisodwa noma ezimbili ngokususelwa ekusebenzeni komshini.
- Ukuze kuzuzwe izinga elikhulu lokwehlukanisa nokuhlukanisa, ukuthambekela kwama-sieve, ivolumu yomoya kanye nokuhlukaniswa kokugcina kungalungiswa ngokufanele.
- Umshini wokumisela ulungele ukususa amatshe emfuleni oqhubekayo wokusanhlamvu
- Ngokwesisekelo sokwehluka kwamandla adonsela phansi athile, ukususwa kokungcola okuphezulu kakhulu njengamatshe, ubumba nezicucu zensimbi nengilazi kuyatholakala.
- Njengomunye wemishini yokuhlanza okusanhlamvu ethandwa kakhulu, isetshenziswa kakhulu esigabeni sokuhlanza okokusebenza okuluhlaza kwizigayo zofulawa, izigayo zelayisi, izigayo zokuphakela kanye nemboni yokucubungula imbewu.
1) Ukuhlukaniswa okuthembekile futhi okuhle kakhulu nokwenziwa ngamatshe.
2) Ingcindezi engeyinhle, alukho uthuli oluphumayo.
3) Amandla aphezulu.
4) Ukusebenza okulula nokugcinwa.
Ipuleti ephezulu yesihlungo:
Izikrini ezintathu zesigaba ezinezimbobo zosayizi ohlukile zisetshenziselwa ukuthuthukisa ukuhlukaniswa okuzenzakalelayo kwezinto.
Ngezansi ngesihlungo ipuleti:
Kusebenza indawo yokususa itshe ngokusebenza kahle okukhulu.
Ukugcina i-sieve ingavimbeki ngokuhlanza i-sieve ngempumelelo.
Isilinganiso se-Amplitude ne-screen angle:
I-amplitude ne-screen angle zingashintshwa ngokuya ngenkomba.
Ukulungiswa komnyango womoya:
Ivolumu yomoya ingalungiswa ngokuya ngezimpawu ezibonakalayo, ukuze kuzuzwe umphumela omuhle we-destone.
TCXT Uchungechunge Tubular Magnet